OMN: Matoota Oduu - OMN
OMN: Matoota Oduu
Godina Harargee Bahaa Aanaa Cinaqsan keessaa dargaggoonni fi hojjattoonni mootummaa bal’inaan hidhamaatti jiraachuun isaanii gabaafame. Kanneen hidhaman rakkoo daangatiin wal qabatee mormii dhiyeenyaa kana geggeefame keessaa qooda fudhattan jedhamnii akka tahe jiraattonni dubbatan.Badrii Yuusuf amams gabaasa qaba.
Godaantonni lammiilee Ethiopia fi Somaaliyaa tahan galaana Yeman keessatti bishaanin nyaatamun isaanii himame. Baqattoonni balaa kanaan lubbuun isaanii darbite kunneen namoota karaa seeraan alaa namoota daddabarsaniin humnaan galaanatti akka darbatamaan IOM ifa godhee jira. Badrii Yuusuf gabaasaa dabalataa qaba.
Gandoonni Oromiyaa daangaa Somaalee irratti argaman deegarsa humnoota poolisii addaa somaalee dawoo godhachuun uummata somaaleedhaan samamatti akka jiran maddeen OMNtti himan. Dhimma kana irratti PBMNO obbo Lammaa Magarsaa kutannoo fi ejjennoo naannoo isaanii dubbatanis qabatamaatti hojitti hin hiikkamne jechuun jiraattonni komatan.
Kun osoo kanaan jiruu sagalee dhukaasa gurguddoon dhaggahamaatti akka jirudha. Kana irraa ka’uun imbaasiin Ameerikaa kan Itoophiyaatti argamu Guyyaa har’aa Hagayyaa 10, 2017 tajaajilli geejjibaa Harariis fi Baabilee giddutti jiru addaan citu isaa beeksise jira.
Sababa kanaan karaa guddaan magaalaa Finfinnee Jijjigaan wal qunnamsiisuu cufame jiraachuusa ibsi imbaasii kana dabaluun eerera.
Imbaasiin Ameerikaa kun itti dabaludhaa lammiileen ameerikaas tahe hojjettoonni imbaasichaa gara iddoowwaan kanneen deemuu irraa akka of qusatan akkeekkachiiseera.
Waggoota lamaa oliif baqqattoonni Oromoo 31 biyya ‘’Indonesia’’ magaalaa ‘’Kupang’’ keessatti hidhamanii dararamaa jiraachuu dubbatan.
OMN: HAALA YEROO ITOOPHIYAA FI OROMIYAA OB. JAWAAR MOHAMMAD WALIIN ADO. 10, 2018
OMN: ODUU OLMAA OROMIYAA (Hagayya 10, 2017)
OMN- ዕለታዊ ዜና (JUL,9, 2018)
OMN: ወቅታዊ የአፍሪካ ቀንድ የፖለቲካ ሁኔታ(JUL 9, 2018)
OMN: SIDAAMU TELEVIZHIINE (የሲዳማ ቴሌቪዢን) July 3, 2018
OMN: ODUU AMMA NU GAHEE (ADOL 4, 2018)